Puntland oo faah-faahin ka bixisay khasaaraha ka dhashay roobabka da’aya – Hornafrik Media Network
Puntland oo faah-faahin ka bixisay khasaaraha ka dhashay roobabka da’aya
Wasiirka Arrimaha gudaha maamulka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garowe ayaa ka warbixiyay khasaaraha ilaa iyo haatan la xaqiijiyay ee ay gaysteen roobabka dabaylaha wata ee ka da’aya degaannada Puntland.
Wasiir Dhabancad, ayaa sheegay in roobabka dabaylaha wata, ay khasaare kala duwan ka gaysteen degaanno ka tirsan Puntland oo u badan kuwa ku teedsan xeebaha gaar ahaan gobolada Gardafuu, Bari, Sanaag iyo Nugaal.
Dhabancad, ayaa xaqiijiyay in hal qof uu ku dhintay doon kalluumeysi oo ku degtay xeebaha degmada Caluula ee gobolka ay Puntland u taqaano Gardafuu, halka xeebta degaanka Ceelaayo ee gobolka Sanaag ay baddu la tagtay ilaa afar doonyood oo kuwa kalluumeysiga ah, inkastoo aysan khasaare nafeed ka dhalan.
Wasiirka ayaa sidoo kale xaqiijiyay, in degaanka Garmaal oo ka tirsan gobolka Nugaal iyo nawaaxigiisa, ay daadad ka dhashay roobka ilaa lix qoys oo reer miyi ah xoolihii kala tageen, halka degmada Eyl-na ay dabaysha roobku dumisay taawarradii Isgaarsiinta.
wasiirka ayaa digniin hor leh ku bixiyay in taxaddar dheeriya la muujiyo, maadaama weli roobabku si xawli ah uga da’ayaan qeybo badan oo ka tirsan gobollada Puntland.
Tirada dadkii lagu laayay Ciraaq oo sii kordheysa